बिहानको सम्भोग कति उत्तम ? | Himal Times
Home स्वास्थ बिहानको सम्भोग कति उत्तम ?
बिहानको सम्भोग कति उत्तम ?
एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार बिहानको समयमा सम्भोग गर्दा उत्तम मानिन्छ, बिहानको समयमा तपाँईको पूजापाठ गर्ने, खाना पकाउने, अफिस जाने तयारी आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसको लागि प्रयाप्त समय छ र पार्टनर टेन्सनमा छैन भने विहानमै सम्भोग गर्दा राम्रो ।
विहानको समयमा सेक्सको साथसाथै पार्टनरसँगै बाथरुममा ‘शावर’मा नुहाउदै मजा लिन पनि सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसो गर्दा आफ्नो पार्टनरसँग अझै बढि आत्मियता प्राप्त पाउने मात्रै होइन रमाइलो पनि हुन्छ ।
उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सम्भोग गर्न सकिन्छ । अधिकांशले सम्भोग रातिमा गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा गर्दा बढि राम्रो मानिएको छ । एकाविहानै सम्भोग गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुने अध्यानले देखाएको छ ।
स्टमडीको अध्ययन अनुसार यो समयमा शरिरमा सेक्स हार्मोन्सको मात्रा बढि उत्पन्न हुने भएकोले विहानै ओछ्यानमा ७ बजेर ३० मिनेटमा सम्भोग गर्न सुरु गर्दा अति उत्तम हुन्छ । यतिमात्रै होइन विहानको सम्भोगले दुबैजनालाई दिनभरी थकान महसुस नहुने, दिमाग पनि तिक्ष्ण हुने र दिनभरी ताजा महसुस हुने गर्दछ । रातीमा खासगरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्नेबेला सेक्स गर्छन् धेरैजसो जोडिले । तर, खाना खाएर सेक्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु जस्तै हुने अध्यापनले देखाएको छ ।
Previous articleनेपाली बैंकको प्रिपेड कार्ड अबदेखि विश्व बजारमा चल्ने
Next articleपाँच पटक हेलिकप्टरले पानी खन्याएपछि आगलागीबाट जोगियो पाथिभरा मन्दिर
महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी वेबमा आधारित विश्व सम्मेलन भब्य रुपमा सम्पन्न
Himaltimes - January 18, 2021
तलब नदिएपछि नगरपालिकामा कर्मचारीकाे तालाबन्दी
अब श्रम स्वकृति विदेशबाटै लिन सकिने बाटाे खुल्ला हुदै